Moscow - lokhu ungumuzi omkhulu lapho lakhiwa nightlife. Ebusuku, njalo ufuna ukwenza okuthile ngendlela yokusangana, into uyosabalala ikhanda lakho futhi ushiye imizwa elikhanyayo kuphela abangabodwa ababehlala ebusuku. Ngakho-ke, izakhamuzi eziningi nezivakashi ukuya ukuhlubula amakilabhu e Moscow. Noise umculo, owesifazane omuhle nemizimba besilisa ukuthi ukuhambisa ngesikhathi nalo. amatafula Ukhululekile futhi SOFAS, cuisine ezihlukahlukene futhi izinhlobo zophuzo oludakayo. Konke lokhu balindelwe izivakashi. Ezindaweni ezinjalo ungakwazi ukugubha hhayi kuphela isikhukhukazi sishiya amachwane aso futhi njengesixhumo sezindluzele amaqembu, kodwa futhi usuku lokuzalwa kwakhe. amaqembu kanokusho diversify monotony inkambiso kwansuku zonke.
Okulandelayo, cabanga amakilabhu avakashelwa, ukunikeza incazelo yabo, cabangela isimo sendawo amantombazane abasebenzela kuzo. Yini izivakashi kudingeka? Ugibe izivakashi izikhungo ezifana?
Eyokuqala indawo simo kuyinto club "KM 19". It kungenziwa ngokuthi yokudlela futhi yangasese-club. utshwala namantombazane sultry bagcwalisa le ndawo. Umuntu ukubheka amantombazana sexy, ujabulela plasticity yabo ngomusa.
Edonsela izivakashi endaweni ekahle futhi ngamanani ezifanele. Imali yokungena kufanele ikhokhwe ayizinkulungwane 1. ruble. The elingaphakathi e isitayela ahlukile langa. Wenza isimo ethokomele futhi zikhululekile. Indawo futhi tekusebentisa esilungele namadoda acebile.
Kukhona ibha omkhulu, ke kungaba kwenziwe izingxoxo wokuziphilisa futhi ibhizinisi. Eyesibili kancane kancane, kungenzeka ukuba uvula negagasi ingxoxo ejulile futhi abaqotho. Njengoba kanye namasevisi kwezikhungo babe lokulala ehlukile futhi amakamelo encane ngezihlambi.
I club uqhosha eziningi amantombazane akhe. Babengabantu ezingaba yikhulu. Ngamunye wabo nge ukubukeka ngabanye, plastic nezimo futhi ephezulu ezingeni umdansi.
Sebawoti Daily ezihlukahlukene indaba ephathwayo amaqembu, okwenza isimo ongenakulibaleka. Ngenxa yalesi bese beveza strip amaqembu eMoscow.
Isinyathelo sesibili siwukuthi yokulinganisela inikezwe club "Deja Vu." Yiqiniso, evakashela hhayi kuphela namanenekazi kanye abesifazane kodwa ngezinye izikhathi ukuza. Abesilisa ukwazi ukuthi ubuhle besifazane futhi indlela okungakusiza ngayo ukuba uchithe isikhathi ongenakulibaleka.
Esikhathini club ungabona umbukiso uhlelo oluthakazelisayo. Igumbi elibizayo kudala isimo nogqozi nothando. Erotic ukudansa amantombazane njengekhampasi amadoda elula. Ngokukhethekile wenza izigcawu ezintathu ukuthi ukubukeza oncomekayo. Kukhona VIP-zone, futhi yangasese Karaoke amadokodo. Zonke lezi ungakwazi ukujabulela behola imali encane.
cuisine Ezihlukahlukene (European, Japanese futhi American), isamba elanele utshwala cocktail non-utshwala ukuhlobisa kusihlwa. Futhi Callao, lapho okufanayo ngaphandle kwakhe ngamaholide. Kuyasiza uphumule futhi uthole injabulo.
On isinyathelo wesithathu simo sethu ixazululwe SOS Club. It uyagijima kuze ikhasimende zokugcina kungcono njalo ebusuku. Ngaphandle incendiary umdanso lokwentiwako, ungavakashela i-karaoke noma-isikhungo SPA. Zonke elise isakhiwo esifanayo, futhi kuba ukhululekile kakhulu. Ungakwazi oda sangasese isisu umdanso noma striptease ngemali ethile.
Kulesi club abantu abaningi abadumile sigubhe izinsuku zokuzalwa kwabo noma nezinye imikhosi. Ngokuvamile, njengesixhumo sezindluzele kanye hen amaqembu. Omunye isinyathelo kude izibopho zomshado, abaningi bakhetha kule club. Lonke Uhlelo ngakho yakhelwe futhi saveza ukuthi kuyoba efiselekayo nize kule ndawo kaningi.
Strip amakilabhu e Moscow: Izikhala
Amantombazane amaningi asebevele besebenza, futhi omunye uyesaba ubuyona futhi ubonise ithalente yabo. E-Moscow strip amaqembu ngokuvamile zidinga entombazane ezikhangayo futhi abanamakhono. Lezi imisebenzi akuzona kuphela ezithakazelisayo, kodwa futhi eholela kahle. Ungasebenza:
Amantombazane ayefunda ukupheka Cocktails ukwazi ukukwenza, uzobe ekubunjweni ngaphandle kwezinkinga. Ukusebenza ifomu ihlinzeka club. Umthwalo, ikhono lokukhulumisana ngamasiko, ubuhle - konke kuyadingeka ukuba naye lo mkhakha.
Omuny - umuntu owamukela izivakashi, ephelezelwa ukuba itafula futhi wethula oyithandayo intombazane. Umsebenzi main - kanjani ukubonisa inhlonipho, ukuze athokozise ukubukeka kwakho. Singasho ukuthi lokhu okuthunyelwe ibhekene sikhungo. Kodwa udinga ukudansa. Ngakho-ke, kufanele bakwazi ushintshele ngokushesha kusukela nenhle ukuxhumana emdansweni abanothando.
Inhloso yalesi okuthunyelwe - ukugcwalisa the dance floor. Ukudansa, ngothando futhi uxoxe izivakashi, kwenza umoya omuhle. Ukwanelisa inkanuko futhi ikhono bazokhululwa - lokhu kuyinto kuyakuza soiskatelnits Ukugunda.
Lesi sikhungo odingeka olukhulu yonke indawo engaphandle dolobha. Ukuphathwa unqume ukwandisa inethiwekhi yayo kanye ukuvula elinye strip club besilisa eMoscow. Ngakho-ke, amakilabhu njalo kudingeka amantombazane abanamakhono izikhala.
Okudingekayo: sibalo chiselled, ukubukeka ekhangayo, yobudala, kungenzeka ngaphandle isipiliyoni.
Operating Izimo: kungenjalo kungayiwa ocansini, imfundo, uhlelo free, amasevisi atholakala artist enze-up kanye stylist, uya solarium endlini, futhi uma intombazane evela edolobheni, izonikeza izindlu khulula. Salary - ruble 95 000.
Moscow striptease amakilabhu ukuvakashela, amadoda nje kuphela kodwa futhi abesifazane. Kungani ukufihla izifiso zakho, uma kungenzeka mina yakhululwa hhayi akhale amadoda? Kwake kwathi ngo-sikhungo, abantu bayakhohlwa isikhathi. Ayakujabulela ukuqonywa imizwelo futhi ujabulele. kusihlwa okunjalo bezijabulisa ukusiza kukhanye up the monotony inkambiso kwansuku, kwakwenziwa eholidini abayizintandokazi, bese nje bazijabulise nabangani noma nezintombi.
Lokhu zesifazane strip club eMoscow wazi kahle. Eziyengayo, sexy umoya ziyoncibilika inhliziyo lady luma. Kule ndawo, ungakwazi iqhaza esikisela ucansi umdanso show. abafana amahle sexy ngeke azungeze izivakashi ubusuku bonke. Ungabheka, touch, dancing kanye ezimnandi onesibindi "owesilisa ', sikwazi ukwanelisa zonke izifiso zakho zokukhanuka. Izivakashi ukhohlwe ukuthi kukhona egumbini, ngoba benomuzwa wokuthi eParadisi. Ungakwazi oda umdanso yangasese, ukwakha kusihlwa yothando nge massage inkanuko.
abesifazane abaningi bakhetha ukugubha izinsuku zokuzalwa kwabo noma hen amaqembu kule "sobugovu;". Futhi uma ekuphathweni waxwayisa ngokuthi ukuvakasha senzeka behlonipha okuthile, khona-ke lesi sikhungo esizolungisa isipho esikhethekile. Kulokhu, lo iholide kuyoba yinto yokuqala, kodwa izinkumbulo uzohlala iminyaka eminingi, ngoba ngenxa yalokhu ngisho nokuthenga necebo strip amaqembu eMoscow.
Yini benze abantu ababa khona kulezi zikhungo?
Izibuyekezo strip amaqembu eMoscow ukubhala ezahlukene: okukhathaza umuntu umuzwa omuhle, futhi engesiye ngempela wanelisekile isevisi ...
Abesifazane ukukhuluma mayelana club 'Caprice', emkhathini kule ndawo ezinhlanu nangaphezulu, amadoda njengoba ngezithombe, - aphumayo, cute, abasha. Intombazane enesizungu ngempela ukuxhumana betfulelwa lezi guys sexy. Ungakwazi oda kumnandi ethangeni umdanso, khetha insizwa azokuthanda, futhi ngeke ukubungaza izivakashi, uze uthole nesithukuthezi.
Abesilisa abavakashele eziningi ebusuku strip amaqembu e Moscow, secrete "Burlesque." Kukhona amaningi amantombazane ezikhanga ukudansa wakhe esikisela ucansi kanye nemibono. Ungakwazi oda umdanso yangasese ukujabulela charm yomzimba wowesifazane wedwa. Izikhungo ezingeni eliphezulu kakhulu. Girls abahlangabezana emnyango, inobungane futhi nobudlelwano. Ngemva kwesikhashana bona kuyabonakala phakathi esiteji. Lezi imizwa ayikwazi ukuyibeka ngamazwi. Girls nje ochwepheshe: ngakho ekhangayo uguqule we eziyengayo kakhulu obugagu tigress bengayi ngamunye. Administration ukhetha amantombazane yisijaka abajabulela ukuba sichithe isikhathi nabo.
"Red Riding Hood" - aliyona nje inganekwane eyabhalwa umlobi, naso ngokwaso club kakhulu. Girls ukuthola le ndawo epharadesi emhlabeni, njengoba bar "Bounty". Kukhona isimo imilingo elenza ukhohlwe yizo zonke izinkinga zokuphila kwansuku zonke, futhi ungafuni ukubuyela ngokoqobo. Lapho kuhlwa kanye namantombazane ukuya "Red Riding Hood", bona ube nomuzwa wokuthi ngoba zembuliwe amakhono ekuseni. Esikhathini club ungakwazi sengathi indlovukazi, futhi zonke lezi abafana sexy - ezigqileni zabo. Nkulunkulu, yini okudingeka wena owesifazane? Abantu abaningi batusa okungenani kanye empilweni yazo zivakashele le club futhi zithi imizwa ngeke omuhle kuphela.
I club "Ikhanya" Amadoda amaningi ukugubha njengesixhumo sezindluzele. Kukhona ungachitha isikhathi esihle kakhulu sokuphinde ukujabulela dance esikisela ucansi amantombazane eziyengayo, baphuze cocktail okumnandi, zama Cuisine Italian. Inkonzo yomngcwabo ezingeni eliphezulu, okuyinto ezingavamile ngoba izindleko kubavakashi. Ungase futhi oda umdanso yangasese, okuzokwenza ukufeza noma iyiphi intombazane zakho ozithandayo. Indawo yokudlela ukhululekile futhi ihlanzekile, ngoba ubeke plus eyodwa.
Izivakashi namanje uthi ngiyabonga club "Admiral". Zonke afuna indoda, ungathola kulesi sikhungo emangalisayo. Futhi amantombazane - njengoba ukukhethwa: konke enhle, uthandeka kanjani, abadansi okhokhelwayo. Zonke aneliseke isevisi, cuisine, amanani kanye izintokazi amahle ezisiza kukhanye besilisa kuphela.
Ngubani uthi abesifazane ungathandi ukuya ukuhlubula amakilabhu? Kungaphawulwa ukuthi izivakashi zabo akuzona nje amadoda. Abesifazane khona kakhulu kukhona okuningi ukubona. Amantombazane akudingeki ukuba ube namahloni, futhi kuba isikhathi sokujabulela ukuphila ngenkathi unga. Abanye abantu bathi ekutholeni uthando ezikhungweni ezinjalo, futhi akekho musa ukusola kwabo ngenxa ke. Kunalokho, lo mhlangano kwaba amahle love story.
amadoda angashadile ukuphupha ngani uthando lweqiniso, ungakhathazeki. Bafuna abakhethiwe zabo ezindaweni ezahlukene, ngoba ukuphila akuqinisekile.
Okugeza Murinsky: ekuhlaziyeni eziyinkimbinkimbi
Ultrasound kwesibeletho: izinhlobo kanye izinkomba ngoba